Abukar Arman: Dhab-ka-Hadal Ammaandarrada Soomaaliya – Radio Daljir
Abukar Arman: Dhab-ka-Hadal Ammaandarrada Soomaaliya
Nofeembar 3, 2017 11:28 g 1
Qoraalka Abukar Arman waxa uu markii hore ku qornaa afka Ingiriiska, bahda Radio Daljir ayaa tarjuntay.
Waxaa dhab ah oo la isku raacay in ammaanka Soomaaliya uu soo xumaanayo, yahayna mid aad u liita. Dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay, boqollaal qof baa nafta ku waayey qaraxyo baabuurta xammuulka loo adeegsaday, laguna bartilmaansaday xarumo Muqdisho caan ka ah. Awoodda qaraxyada, dhimashada, baaba’a iyo hantiburburka ka dhashay qaraxii 14ka Oktoobar waxa uu ahaa mid aan horay loo arag in ka badan rubuc qarni ay Muqdisho dhib iyo halaag la daalaadhacaysay.
Labadaan qarax ee kala danbeeyey ee arxanlaawayaasha argagixisadu ay fuliyeen waxaa dabasocda eed ah in ay wateen Waraaqaha Aqoonsiga Nabadsugidda Qaranka, taas oo ayana keentay in diiradda la saaro Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya (NISA). Waxaa la iswaydiinayaa su’aalo rasmi ah oo ku saabsan hoggaanka hay’adda, xirfadooda sirdoon, iyo waliba awoodda iyo hab-maamulka hay’adda.
Saas oo ay tahay, sidee bay hadaba suurtagal ku tahay in shaaca laga qaado xaqaa’iqa maanta jira, looguna sheego ummad muragaysan oo naxdintii ka badatay in “iftiinkii soo bidhaamay” shalay uusan runtii iftiin ahayn ee uu ahaa tareen bilaa bareeg ah, rogmanaya, waxna aan reebi doonin? Sidee la yeelaa oo dadkan wax loogu sheegaa ayaga oo hadana quus iyo niyad-jab laga dhowrayo? Dhibka maanta jiraa waa kaas, saas oo xaal yahayna, runta lagama gabbadee waa in runta la sheegaa.
Midi waa albaabka iska-dabawareega kaas oo ah mid hoggaanka fashilmay ee laamaha ammaanka midba maalin la keeno, mid kalena maalin kale. Sannad walba taliye cusub baa la magacaabaa, mid kalena waa la cayriyaa. Kii la keenay wuxuu wataa in la qabiil iyo la midab ah, kii tagey asna wixii uu kal hore la yimid buu la noqdaa.
Kuwo waa kuwo ahaan jiray hoggaamiyayaal al-Shabaab oo leh taariikh aad u foolxun, aan maalin cafis weydiisan Soomaalida ay dhaceen, dhibeen, dhaawaceen, iyo kuwa dhintay, saas oo ay tahayna inta dowladdu ay gacanta midig soo qabatay, oo haah, ay gacanta ka saartay xilal sarsare, kuwo laamo dowli ah, iyo waliba kuwo aad muhiim u ah sida NISA.
Midna waa Dowladda Ingiriiska oo xiran shaarka UNSOM si ay u ilaashato shirkadeeda cusub ee ay mar dhaweyd Soomaaliya ka yagleeshay, waa Soma Oil iyo Gas. Waa wajiga hore ee deegaanka Xalane, ahna hoy ay isugu yimaadeen nooc kasta, kan wanaagga wada, kan xun, iyo kan foolxun iyo ciidamadooda calooshooda-u-shaqaystayaasha. Dhammaantood waxaa gacanta ugu jira macaanka iyo kharaarka marna ammaanka lagu adkeeyo, marna lagu liida, hadba kii ay doonaan.
Dhanka kale waa Dowladda Maraykanka. Waana AFRICOM iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee dowladda Soomaaliya ka gargaara kahortagga argagixisada, qaabilsan tababarka ciidamada argagixiso-ladirirka iyo mushaar-bixintooda, hoggaankuna waa Dowladda Maraykanka. In kasta oo hawlgalada Maraykanka ee Soomaaliya aysan aheyn sir aad u qarsoon, hadana waxa ay saaxadda siyaasadda si rasmi ah uga soo muuqdeen kaddib dilkii ciidamo komaandooska Maraykanka ee loo yaqaan Green Beret, iyo doorkooda Afrika markii afar ciidamadaas kamid ah lagu dilay dalka Niger.
Intaas oo marxaladood oo kore way adagtahay in farta lagu fiiqo kee, ama kuwee ayaga oo isbiirsanaya, baa sababay in argagixisadu waayahaan danbe ay ku tallaabsato aragagax iyo wuxuushnimo intaas le’eg.
Sidii looga bartay, dowladdu isla markiiba waxa ay la soo booday hawsheedii argagixiso-ladirirka: al-Shabaab iyo ISIS baa falkaan lagu halaagmay ka danbeeyey. Waxa ay rabaan in ay Soomaali tirtiraan, sidaas darteed, aan gacmaha isqabsano oo aan godadkooda ugu galno. Waxa aan qaadaynaa dagaal kii ugu weynaa, dhinacyo badan iyo gobolo kala duwan baan ka soo jihaysan doonaa, “anna waxaad iga heli doontaan safka hore,” baa laga hayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo).
Bal hadde ogoow argagixisadu – cidda ay rabto ha ahaato e, al-Shabaab ama kuwa kale ee dhammaantood dhexda uga jira hawlo waxa ay yihiin aan la aqoon – waxa ay hawlahooda halaagan ka fuliyaan isbaarooyinka iyo baraha ciidamada ee dhan kasta oo Muqdisho. Haddii aadan ogowna bal hadde ogoow quwadda maanta adduunka ugu weyn oo wadata boqollaal kun oo ciidamadeeda kuwa ugu fiican waxba waa ay ka tari weyday argagixisada Ciraaq iyo Afqanistaan. Saas oo ay tahay Madaxweyne Farmaajo inta dagaal iclaamiyey buu hadana diyaarad qaatay asaga oo ciidan u raadsaday Itoobiya, Yugaandha, Kenya iyo Jabuuti, ‘si uu al-shabaab meel u saaro, si kamadanbeys ahna uu meel uga soo haro.’
Si loo nabadeeyo Soomaaliya waa in marka hore meel lagu ogaadaa dhammaan halxiraalayaasha ammaanka. Tan kale, waa in la ogaado in halaagga ismiidaaminta ee al-Shabaab ka sokoow, ammaandarada sii liidaneysa waxaa qayb ka aha iskumilanka ammuuraha kor ku sharraxan, kuwo gudaha ah iyo kuwo shisheeyaba.
Soomaaliya waa mashruuc lagu faa’iidey, watana rabitaanka caalamka, waa sac gobolka u irmaan oo la iska listo, waana goob u furan in laga faa’iideysto, ciidan kastana isku fidiyo. Laakiin waa goob ay go’doon ka tahay dowladdii lahayd ee la rabay in ay danaha shacabkeeda ilaaliso, inta kalena uu midba rabo in uu kan kale daaqadda kala baxo, kana ilaaliyo in uu danihiisa fushado. Meel dowladdii lahayd la go’doomiyey, kuwii go’doomiyeyna madaxa iskula jiraan baa waxaa ka dhashay nidaam halaagsan oo “gacanba gacanta kale dhaqayso” taasna waxa ay keentay ammaandarro joogto ah, laakiin si loo maamulan karo.
Shacabka Soomaaliyeed waxa ay astaahilaan sidan si ka roon, waxa ay astaahilaan wax ka roon hoggaan aan karti lahayn iyo musuqmaasuq joogto ah.
Maqaalka kore oo afka Igiriiska ku qoran hoos arag:
Qormooyinka Daljir 50 Siyaasadda & Dhaqaalaha 463 Wararka 18169
Jose Mourinho, Tababaraha Man United: “Canshuurta Waa Bixiyey!” (dhegayso)
Abdifatah Omar Geddi 2 years ago
Run haddii aan la sheegin, wixii la sheegaa waa been, sababtoo ah ma filayo in ay jiraan wax u dhaxeeya run iyo been aragtidayda. Ma aqaan in ay jirto cid taqaanna wax u dhaxeeya run iyo been oo la sheegi karo.